Junior Digital Marketing Executive (Social Media) ﻿
•	Social Media ကို ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (Facebook, Twitter. Instagram. Google. Youtube, etc) Customer များမေးလာသော မေးခွန်းများကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ရမည်။
•	Computer (Microsoft Office- Word. Excel. Power Point,Internet, Email) ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်ရမည်။
•	(မြန်မာစာ လက်ကွက် အသုံးပြုနိုင်ရမည်။) Digital Marketing ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
•	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Junior Digital Marketing Executive (Social Media) Media, Digital & Creative jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Amigos International Co., Ltd. Media,Digital & Creative jobs Media,Digital & Creative jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon